UNGAYITHENGA NJANI KWAYE PHI INKCUBEKO YETIKITI LAMATIKITI (CTC) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Ungayithenga njani kwaye phi iNkcubeko yeTikiti laMatikiti (CTC) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Urhwebo lwe-CTC
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-CTC ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-CTC
Ibangwa ukuba yindawo esekwe e-China esekwe kwibhloko yenkqubo yokusebenza yenkcubeko ukusombulula utshintshiselwano lwetikiti, ubunini, ukuqinisekiswa nokusasazwa.
Ixabiso langoku le-CTC yi- $ 0.01 kwaye ikwindawo ye-3237 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje inyuse iipesenti ezingama-34.62 ngexesha lokubhalwa.
I-CTC idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthenga ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Nangona kunjalo, usenokuyithenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala ngokuthenga i-USDT kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto kwaye emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-CTC .
Eyona python cheat sheet
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-CTC yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-USDT yethu kutshintshiselwano ukuba i-CTC ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBitForex njengotshintshiselwano lwethu. IBitForex lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
IBitForex yenye yezo zotshintshiselwano nge-imali yedatha evela elunxwemeni (eSeychelles). Olu tshintsho lolunye lotshintshiselwano abathandathu ababhaliswe eSeychelles. Kwi-imeyile ethunyelwe kubasebenzisi bayo nge-23 ka-Okthobha i-2019, iBitForex yazisa ukuba ngoku banabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3. Utshintshiselwano lukwanakho nokukhethwa okufanelekileyo kwezibini zorhwebo (ezingama-92 ezahlukeneyo zokurhweba) kunye nemali encomekayo kakhulu. IBitForex ayitsho ukuba abatyali zimali baseMelika abanakho ukurhweba apha. Ke, siyakholelwa ukuba abatyali mali baseMelika banokuthengisa apha. Nangona kunjalo, bonke abatyali zimali baseMelika kufuneka benze olwabo uluvo malunga nokuba imigaqo karhulumente okanye imithetho yomanyano ichaphazela imisebenzi yabo yorhwebo lwangaphandle okanye hayi. IBitForex ayitsho ukuba abatyali zimali baseMelika abanakho ukurhweba apha. Ke, siyakholelwa ukuba abatyali mali baseMelika banokuthengisa apha.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'idilesi ye-USDT', le yidilesi kawonke-wonke eyenzelwe isipaji sakho se-USDT eBitForex kwaye unokufumana i-USDT ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-USDT yethu esele siyithengile kwi-Coinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Ngoku buyela emva kwi-BitForex kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeke kwimeko yenethiwekhi yokuhamba yenethiwekhi ye-USDT, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwiBitForex nje ukuba i-USDT yakho ifike. Kwaye ngoku sele ukulungele ukuthenga i-CTC!
Buyela kwiBitForex, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho angangcangcazela, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kwikholamu elungileyo kukho ibha yokukhangela, ngoku qiniseka ukuba 'i-USDT' ikhethiwe njengoko sithengisa i-USDT kwisibini se-altcoin. Cofa kuyo kwaye uchwetheze 'CTC', kuya kufuneka ubone i-CTC / i-USDT, ukhethe eso sibini kwaye kuya kufuneka ubone itshathi yamaxabiso e-CTC / USDT embindini wephepha.
Apha ngezantsi kukho ibhokisi eneqhosha eliluhlaza elithi 'Thenga i-CTC', ngaphakathi kwebhokisi, khetha ithebhu 'yeNtengiso' apha njengoko lolona hlobo luhamba phambili lokuthenga iiodolo. Unokuchwetheza kwisixa sakho okanye ukhethe ukuba yeyiphi na indawo oyithandayo ongayisebenzisa ekuthengeni, ngokunqakraza kumaqhosha eepesenti. Xa uqinisekisile yonke into, cofa 'Thenga i-CTC'. Voila! Ekugqibeleni uthenge i-CTC!
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba i-CTC idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-CTC yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokuyigcina ikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Ndingayithenga i-CTC ngemali?
Ngaba zikho iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-CTC eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga i-CTC okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-CTC ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-USDT kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-USDT yakho kwi-AltCoin yokutshintshiselana.
Funda ngakumbi malunga nezinto ezisisiseko zetyunithi yeTikiti leNkcubeko kunye nexabiso langoku apha.
I-ethernity crypto apho unokuthenga khona
ubhalisa njani vtech ifowuni
Ukushicilelwa kwamaphepha angenanto epson wf 2540
Guqula ifayile yerhafu ibe yi-pdf